CHI-SPANIEL DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Chi-Spaniel Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Chihuahua / Cocker Spaniel eeyo isku dhafan oo isku dhafan
'Kani waa ilmahayga Daisy Mae oo jira 6 bilood. Waxaan ka helnay badbaadinta Malaa'igta Merry. Miisaankeedu wuxuu ka yaryahay 10 rodol. iyo haynta. Kama fileyno inay sii weynaan doonto. Iyadu waa eey weyn. Iyadu waa eey aad u saaxiibtinimo badan. Ma taqaano qof qalaad oo waxay jeceshahay carruurta. Saaxiibkeeda ugu fiican waa ninkeyga Yorkie. Waxay ciyaarayaan saacado iyo saacado. Si dhakhso leh ayay wax u barataa. Aad iyo aad ayey u fududahay tababbarka dheriga . '
Yuu yahay Cocker
Chi-Spaniel ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Chihuahua iyo Cocker Spaniel . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Ripley Cocker Spaniel / Chihuahua wuxuu isku jiraa 2 sano jir 'Ripley waa midkeyga 14 lb. Cocker Spaniel / Chihuahua isku darka oo u eg a yar Brittany Spaniel (hadday waxaas oo kale jireen). Waxay leedahay baalal deeqsi ah oo lugaha, dhegaha, iyo dabada ah waana shid fudud. Waxay leedahay shaqsiyad kalgacal, macaan, iyo is dhiibin. Iyadu waa deggan tahay oo aan wax baabi'in, oo way jeceshahay bisadaha . Marka la soo koobo, ma aanan codsan karin eeyga ugu fiican. Waxay u qalantay sugitaankeeda!
Ripley the Cocker Spaniel / Chihuahua ayaa isku qasan sida eey markay jiraan 2 bilood jir xiranaya funaanad casaan ah
'Tani waa Zoey sida eey. Iyadu waa Chihuahua (lab) iyo Cocker Spaniel (dumar) isku dhafan. Iyadu waa qof caqli badan oo ciyaar badan. Waxay soo ceshataa oo soo qabataa alaabta lagu ciyaaro, waxay fahamsan tahay dhowr erey Ha ogeyn inta ay la egtahay. Waa wehel la yaab leh.
'Tani waa Miss Ruby Moon aka Ruby. Waa 12-toddobaad Chihuahua iyo madow Cocker Spaniel isku dar. Hooyadeed waa Chihuahua. Waxaan ku noolahay Michigan iyaduna waa la i helay iyada oo aan ku maqnaa safar safar ah. Waxay ku dhalatay Lookout Mt., TN, dhinaca midig ee Ruby Falls. Waxay ahayd bil buuxda markii aan helay, taasi waa sida ay magaceeda ku heshay. Cunug liita ayaa sidaa ahaa boodada ku habsatay in dhagaheeda dhiiga markaan qubay. Waxay ku lahayd laba qubays barkadaha qubeyska ee nasashada si ay u maydhaan badankood boodada. Aad ayey u faraxsan tahay hadda waxayna qoyskeyga u keentay farxad badan. Iyadu waa macaan tahay, kalgacal badan tahay, ciyaar badan tahay, caqli badan tahay, eey yar yar oo dabeecad wanaagsan oo xiise leh, jecel inay banaanka ka joogto, 2-mayl socod , Waxay miisaankeedu yahay 3.25 lbs. oo waa wax qurux badan! Waxay leedahay walaal aanan qaadan, wuxuu ahaa laba jibbaarkeed oo dhammaantoodna wuxuu ahaa madow oo wuxuu umuuqday mid ka Cocker badan Chihuahua. '
Daisy Mae the Chi-Spaniel oo jira 6 bilood
Daisy Mae the Chi-Spaniel oo ah cunug yar oo xiran shaati.
'La kulan Penny Foori. Waxay u jilicsan tahay sida Chihuahua, in kasta oo muuqaalkeeda muuqaalkeedu xoogaa u eg yahay Cocker. (Markii ay yarayd waxay u ekaatay Chihuahua wajiga) Waxay miisaankeedu yahay 20 rodol. hadda. Ilaa la kala sifeeyay laabta iyo miskaha ayaa u muuqday a Greyhound ama Xoq . Tan iyo markaas, waxay buuxisay miskaha. Sidoo kale, waxay daadisaa A LOT. Waxay u bartaa tabaha si fudud oo leh xoog leh, milkiileyaal sheegasho leh waa adeecid. Sikastaba, waxaan kugula talinayaa inaad maal gashato xirfadihii hore ee bulsheed sida eey. '
'Penny foodhi Chi-Spaniel wuxuu jecel yahay inuu ordo oo wax soo qaato. Way fuuli kartaa masaafo dheer umana muuqato inay waligeed tamar ka baxeyso banaanka. Waxaan guud ahaan soco .5 illaa 1 mayl maalintii iyo mid dheeri ah 5-may. + soco dhamaadka usbuuca.
Penny Foorida Chi-Spaniel-ka
waxa sirdoonka eey waxaa Clifford eey casaan weyn
sawirrada jilbaha lagu qaso feeryahan
madow iyo caddaan isku darka ceerigaaga
eey biyo cadaan ah oo cadaan ah
noocyada eeyaha ugaarsiga oo leh sawirro